Fivondronamben'ny Federasiona Ranomasimbe Indiana - fampidirana ss 1t13
TARI-DALANA FIANARANA BAIBOLY HO AN'NY LEHIBE
JANOARY - FEBROARY - MARTSA 2013
"IREO FOTOTRA NIANDOHANA"
Nomanin'i L. James Gibson
TAMIN'NY VOALOHANY TANY AM-PIANDOHANA
Sokafy ao amin'ny boky voalohany, toko voalohany, andininy voalohany, ny Baiboly. Mariho fa tsy misy resaka na dia kely aza momba an'i Kristy maty noho ny fahotantsika ao, tsy misy resaka na dia kely aza momba ny fitsanganan'ny tenany tamin'ny maty avy tao am-pasana. Tsy misy resaka na dia kely aza momba ny toetry ny maty, na momba ny Andro Fanavotana, na momba ny Sabata, andro fahafito akory aza ao.
Tsy misy resaka momba ireny fampianarana ireny ao amin'ireo teny voalohany ao amin'ny Baiboly satria ireo fampianarana ireo, sy ireo fahamarinana mifandray aminy, dia tsy misy dikany raha misaraka amin'izay lazain'ireo teny voalohany ao amin'ny Baiboly - dia ny hoe "tamin'ny voalohany Andriamanitra nahary ny lanitra sy ny tany."
Ny famoronana no fahamarinana fototra ao amin'ny Soratra Masina. Ny fampianarana ao amin'ny Baiboly hafa rehetra - ny Nahatongavan'i Jesosy ho Olona, ny Hazo Fijaliana, Ny Fiavian'i Kristy Fanindroany, ary ny fampianarana ara-Baiboly hafa rehetra ihany koa - dia miorina amin'ny fahamarinana hoe noforonin'i Jehovah ity tontolo misy antsika ity.
Izany no mahatonga ny Famoronana ho hita ao amin'ireo takila voalohany ao amin'ny Baiboly, ary tsy ao ihany fa ao amin'ireo boky dimy voalohany nosoratan'i Mosesy, ao amin'ny boky nosoratan'ny mpaminany, ao amin'ny Salamo, ao amin'ireo Filazantsara efatra, ao amin'ireo epistily, ao amin'ny Asan'ny apostoly, ary ao amin'ny Apokalipsy. Ary, saika amin'ny tranga rehetra, ny tontolon-kevitra ara-teolojia, dia mitaky izany ho ara-bakiteny.
I Paoly, ohatra, dia nanoratra fa "ny fahafatesana nanjaka hatramin'i Adama ka hatramin'i Mosesy, na dia tamin'izay tsy nanota tahaka ny nanotan'i Adama aza, izay tandindon'Ilay ho avy" (Rom. 5:14). Tsy vitan'ny hoe ampifandraisin'i Paoly amin'i Adama ara-bakiteny fotsiny i Jesosy ara-bakiteny, fa ny tontolo-kevitry ny fanambarany ao amin'ny Rom. 5 koa dia mampifamatotra io fifandraisana io amin'ny drafi-pamonjena, foto-pampianarana lehibe dia lehibe izay azontsika amin'ny heviny aa-bakiteny indrindra ihany koa, dia izao izany: isika dia olombelona lavo miatrika fandringanana mandrakizay na fiainana mandrakizay - ara-bakiteny!
Ary indro fa i Jesosy mihitsy eto no mampiasa teny nalainy avy tao amin'ny Gen. 1 sy 2: "Ary Izy namaly ka nanao hoe: tsy mbola novakinareo va ny teny, fa Izay nahary azy tamin'ny voalohany dia nahary azy ho 'lahy sy vavy'(Gen. 1:27), ka dia nanao hoe: Ary 'noho izany ny lehilahy dia handao ny rainy sy ny reniny ka hikambana amin'ny vadiny; ary dia ho nofo iray ihany izy roroa' (Gen. 2:24)? ka dia tsy roa intsony izy, fa nofo iray ihany." - Mat. 19:4-6. Raha neken'i Jesôsy sy nampianariny àry fa ara-bakiteny ny tantara momba ny famoronana, ahoana no ahafahan'ireo milaza azy ho mpanara-dia Azy manana hevitra hafa noho izany?
Ny anarantsika hoe "Advantista Mitandrina ny Andro Fahafito, mihitsy koa dia vavolombelona mitory mivantana ny famoronana tao anatin'ny enina andro. Na dia misy feo mety mandrisika antsika hampiditra ny foto-kevitra momba ny fivoarana miandalana ho ao anatin'ny teôlôjiantsika aza, dia lazaina mazava fa mifanohitra hatrany ifotony mihitsy ny fampianaran'ny Fiangonana Advantista Mitandrina ny Andro Fahafito sy ny fampianaran'i Darwin. Raha araka ny lôjika, dia tsy misy olona afaka manana ireo fomba fijery roa ireo miaraka.
Araka izany, ny lesona amin'ity telovolana ity dia mandalina ny foto-pampianarana momba ny famoronana araka ny fitantarana izany ao amin'ny Gen. 1 sy 2 ary manadihady ny fiantraikan' izany amin'ny foto-pinoantsika maromaro - ao anatin'izany ny fitondrantena, ny fahotana, ny fanambadiana, ny fitantanam-piainana, sy ny maro hafa koa. Na dia heverina aza hoe ara-bakiteny io tantara io ka araka izany ny asa atao, hasehon'ity telovolana ity hatrany kosa fa marina ara-tantara ny tantara momba ny famoronana ary miorina amin'izany fahamarinana izany ny hafatra fototra ao amin'ny Baiboly.
Raiso, ohatra, ny filazantsara. Araka ny voalazan'ny Soratra Masina, dia tsara kokoa noho ny amin'izao fotoana izao isika olombelona tamin'ny fotoan'ny famoronana. Tonga i Jesôsy hamonjy antsika amin'ny fahafatesana nateraky ny fahotan'i Adama sy i Eva. Araka ny foto-kevitra momba ny fivoarana miandalana kosa, ny Tompo dia tonga nofo tao amin'ny rajako iray, izay niforona tamin'ny fomba miandalana tao anatin'ny tsingerin'ny fifantenana mandeha ho azy izay ahitana fifamonoana sy herisetra mahatsiravina, ka ny anton'izany rehetra izany dia ny hanafoana ny fahafatesana, "izay fahavalo farany" (1 Kôr. 15:26). Ahoana anefa no ilazana fa "fahavalo" ny fahafatesana raha toa ka anankiray amin'ireo fomba nofidin'Andriamanitra hamoronana ny olombelona izany? Tsy maintsy ho nampiasa maro be tamin'ireo 'Homo erectus' sy 'Homo heidelbergensis' ary 'Homo neanderthalensis' maty ny Tompo izay vao hahazo amin'ny farany anankiray tahaka ny endriny CHomo sapiens'). Raha marina àry izany ny voalazan'ny foto-kevitra momba ny fivoarana miandalana, dia izao: tonga hamonjy ny taranak'olombelona ho afaka amin'ny fomba izay nampiasain'Andriamanitra hamoronana azy tamin'ny voalohany izany i Jesôsy.
Hitantsika eto àry izany fa ny fampifangaroana ireo fahamarinana ara-Baiboly amin'ireo fijery tsy ara-Baiboly dia miteraka hevi-dravina izay tokony hampieritreritra ny olona mahitsy fo mikatsaka ny fahamarinana. Rehefa mandroso hatrany eo amin'ny fianarana ny lesona amin'ity telovolana ity isika, dia mbola hahita antony maro hafa mahatonga ny famoronana tao anatin'ny enina andro ara-bakiteny ho zava-dehibe indrindra ho an'izay rehetra inoantsika sy antony maro hafa manaporofo fa ny marimaritra iraisana eo amin'ny resaka famoronana dia fanozongozonana ny fototra iorenan'ny filazantsara sy ireo fampianarana izay mahaforona antsika araka izao maha-isika antsika izao.
Talen'ny Ivon-toeram-pikarohana momba ny 'Géoscience' (www.grisda.org) any Loma Linda, any Californie, i L. James Gibson. Maro ireo lahatsoratra efa nosoratany mikasika ny fifandraisana misy eo amin'ny famoronana sy ny siansa.
Jesosy, Mpahary Ny Lanitra Sy Ny Tany
Famoronana: Mandrafitra Izao Tontolo Izao
Vita Ny Famoronana
Famoronana: Foto-kevitra Ara-Baiboly
Famoronana sy Fitondrantena/Fomba Fiaina
Ny Famoronana Sy Ny Fahalavoana
Mijery Amin'ny Fitaratra, Manjavozavo
Jesosy: Mpanome Sy Mpanohana
Fanambadiana: Fanomezana Hatrany Edena
Fitantanam-piainana Sy Ny Tontolo Iainana
Sabata: Fanomezana Hatrany Edena
Ny Famoronana Sy Ny Filazantsara
Fiaraha-miasa tamin'ny Trano Printy Advantista Soamanandrariny